Ambangovangony Mikasika Ireo Fifanoherana, Ireo Pitsopitsony Manahirana Ary Ny Hatsaran’ny Fiainana Ao Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2018 12:09 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2007)
ndreto ny ambangovangony ahitana ny antsipirihan'ireo fifanoherana, ireo pitsopitsony manahirana ary ny hatsaran'ny fiainana ao Ogandà.
Ao Apac, vehivavy roa no mitady sakafo vezetariana (tsy mihinana afa-tsy zavamaniry).
Izay no fanombohan'ny fitadiavana sakafo tena nampitolagaga indrindra izay mbola tsy hitako hatrizay. Tsy nangataka zavatra betsaka izahay: tsaramaso, vary, mofo chapatti angamba (ny chapatti dia karazana mfo indiana tsy ampiasàna lalivay) – zavatra tsotra sady mora, foto-tsakafo iombonana ao Ogandà. Nitondra anay hitety ny tanàna ny fitadiavanay, tamina bisikilety roa sy trano fisakafoanana enina samihafa, vehivavy daholo no mitantana ny ankamaroany izay zavatra mitovy avokoa no nolazainy taminay.
Hena nasaly. Hena vao. Tsy misy tsaramaso. Tsy misy vary. Tsy misy mofo ‘chapatti'”
Tsikombakomba hamelezana ny vezetariana izany, narafitra sy notantanana andiana mpirahavavy izay nitantana ny fizaràna sakafo ao Apac, ao an-damosin'ny LC5. Tanàna iray manontolo – foiben'ny distrika, tsy latsak'izay – sady tsy ahitàna tsaramaso. Nipetraka iray minitra tao an'efitranon'ny hoteli nisy anay izaho sy Rebecca, nanontany tena ny amin'izay hataonay.
Ao Kampala, manazava i Glenna Gordon mikasika ireo fifanoherana izay misy ao Cafe Cap, ilay toerana fivarotana kafe tena matsiro indrindra ao an-tanàna:
Niara-nipetraka izahay sy Ali, ilay olona tsy fantatro akory, teo amin'ny latabatra maloton'ny Café Cap satria io no hany nisy toerana nisokatra tao amin'ny latabatra natao ho an'ny mpifoka sigara tao amin'ilay toerana fisotroana café be olona. Pap, izay miorina eo ambanin'ny Parlemanteran'i Kampala sady tonga dia eo ambonin'ny lalambahoaka, no Starbucks amin'ny endrika ogandezy, izay tsy ahitana afatsy sakafo tena ratsy sy fiarahamonina iray mbola tena mifanosontsosona. Mbu, io no Ogandà, izay miaina latsaky ny iray dolara isanandro ny fianakaviana antonontonony ao aminy ary ny vidin'ny cappuccino iray ao amin'ny café Pap dia mitovy amin'ny karaman'ny asa roa andro. 28 tapitrisa no isan'ny olona ao Ogandà, 1,2 tapitrisa ao Kampala ary olona manodidina ny 20 no hita misakafo ao café Pap na amin'ny firy na amin'ny firy.
Ao Gulu, manoratra mikasika ireo vehivavin'i Kôngô tsy misy mpahatsiaro i Moses Odokonyero, izay nalaina tao an-tranony ary nentina nankany Ogandà niaraka tamin'ny andiany faha-4 tao amin'ny tafika Ogandey :
Nifanena tamin'i Little Lali Paalwa aho, telo taona lasa izay, tao amin'ny toeram-pitsaboana ravarava an'ny Tafika Ogandey Andiany faha-4 tao Gulu, any avaratr'i Ogandà. Nanana adidy goavana ilay zazavavy kely fito nikarakara ny reniny, Mamisha, izay eo ambavahaonan'ny fahafatesana, nitondra ny tsimokaretina VIH taona. “Te-hihinana atody i Neny, nefa tsy misy atody. Te hihinana hena i Neny, nefa tsy misy hena. Ny hany anananay dia ireo tsaramaso sy posho (éd. koban-katsaka), hoy izy tamiko.
Tao amin'ny Nosy Nsazi ao amin'ny Farihin'i Victoria, nanoritsoritra ny fiovaovan'ny natiora sy ny olombelona ao amin'ilay Nosy i Basawad:
Ny Nosy Nsazi sy ireo nosy maro hafa eo amin'ilay Farihy, no hery misintona an'ireo ogandey tsy an'asa. Ny tanànan'i Nsazi no tena fitaratra tsara ahitàna ny niafaran'ireo nosy eo amin'ilay farihy. “Ilay tanàna dia fitambaran'ireo trano tomboka vita amin'ny tany sy hazo norariana, sarahan'ireo lalankely mamotaka, miaraka amin'ireo trano vitsivitsy vita amin'ny hazo sy mbola somary ratsy toerana eo amboninà beton. Ampiasaina hosotroina sy hidiovana ny ranon'ny Farihy, tsy ara-pahasalamana. Manodidina ny 2 000 ireo olona ao Nsazi ankehitriny; tamin'ny taona 1998, nanodidina ny 600 monja no isan'ny mponina tao. Marobe no mihevitra fa paradisa ho an'ny fizahantany ireo nosy tao amin'ny farihy Victoria. Nefa ireo nosy, toa an'i Nsazi, manjary be mponina loatra ankehitriny, zara raha misitraka an'ireo fotodrafitrasa ara-tsosialy sy hafa koa, ary tsy mandray anjara afa-tsy amin'ny famotehana haingana ny Farihy Victoria sy ireo harenany. Ny ‘Nile Perch’ (karazan-trondro) ao amin'i Nil no nandripaka an'ireo karazana an-jatony tami'ireo trondro zanatany tao anaty Farihy. Saingy, ankehitriny, ny olona no tena manimba haingana ny Farihin'i Victoria.”
Ao Arua, aisehon'i Pernille ny vehivavy iray mivarotra matoke (akondro masaka antonony), voatabia ary akoho :
Ho ahy, io no Ogandà avaratra anaty sary iray, vehivavy iray mitafy kufa ulay sy vitenge, eny an-dalana ho any an-tsenan'i Arua miaraka amina lafika kawera iray miaraka amin'ireo voatabia avy amin'ny shamba-ny, akohovavy iray sy kitapo kely iray eny an-tanany ho an'ny takalo madinika (famerimbola hoy ny Malagasy).
1 andro izayAfrika Atsimo